I-Engine Casting Crankshaft elungele iPerkins 4.203 ngentengo yefektri
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: I-Perkins135
30years professional engine & ugandaganda izingxenye nomkhiqizi
On-time kwezidingo isiqinisekiso
Ukulawulwa kwekhwalithi eyi-100%
Amasampula anganikezwa ukuhlola ikhwalithi
1104 uPerkins zz90239
I-GDA403 Perkins 115256950
I-GDA404 Perkins 115256750
I-Engine Casting Crankshaft yePerkins135 enenombolo ye-Oem 31312730 ngentengo yefektri
Ukunemba okuphezulu nokugqoka ukumelana
I-Engine Casting Crankshaft elungele iPerkins 1104 enenombolo ye-Oem Zz90238 ngentengo yefektri
Amandla we-crankshaft anzima kakhulu. Isebenza ngaphansi kwesenzo esihlanganisiwe sokushintsha kwamandla kagesi ngezikhathi ezithile, amandla angasebenzi kanye nomzuzu wamandla, futhi kuthwala imithwalo eshintshanayo yokuguqa nokuhlukumeza. Ngakho-ke, i-crankshaft iyadingeka ukuze ibe namandla akwanele okukhathala nokuqina ukumelana nokugoba nokuhlukumeza; iphephabhuku kufanele libe nendawo yokuthwala enkulu ngokwanele futhi igqoke ukumelana. Sinikezela ngama-crankshafts wemoto yasePerkins, amabanga agcwele kaPerkins, ama-crankshafts amasha. Sinomkhiqizo oqinile, isikhathi esifushane sokulethwa, singaqinisekisa ukunikezwa kwezimpahla, futhi samukela amakhasimende ukuthi axoxisane ngebhizinisi. Siphinde futhi sinikeze ukubonisana ngomkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Renault R4
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: IVolkswagen
imodeli: 038109101R / 038109101AH
Impact amandla: 1000 （mPa）
Ubukhulu bephakheji: 500 * 20 * 20
Inombolo ye-athikili: YD358A
I-crankshaft entsha yemoto ilungele iRenault291
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Isuzu4BD1
Ukucinywa kokuvama okuphakathi kwamaphakathi kwe-crankshaft kuzokwamukela idivaysi yokushisa efakwa ngaphakathi elawulwa yi-microcomputer evaliwe evulekile, enezici zokusebenza kahle, ikhwalithi ezinzile, nokusebenza okulawulwayo.
Umkhiqizo wenziwe ngensimbi ephezulu ye-ductile nensimbi eyakhiwe, futhi iphathwa ngobuchwepheshe bokuqinisa ubuso ukuthuthukisa amandla okukhathala kwe-crankshaft. Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, isethi ye-generator, ikhwalithi yangempela, enokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
Ikhwalithi yemoto yekhwalithi ephezulu ilungele iRenault1.9F8T
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Renault1.9F8T
I-Engine Casting Crankshaft yePerkins1103 enenombolo ye-Oem zz90078 / 4181V107 ngentengo yefektri
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: I-Perkins1103
I-OEM: zz90078 / 4181V107
Ngenkathi siphishekela ukuthuthuka okuqhubekayo kwemikhiqizo, sihlala sizibophezele ekunikezeni abasebenzisi isipiliyoni senkonzo esezingeni eliphakeme.
Ngesiqubulo esithi "ekahle, isevisi yenhliziyo" kanye nomqondo wokuthi "ubuchwepheshe, ukuthula kwengqondo nokuhlonipha", sizimisele ukudala uhla olugcwele lwezingxenye zekhwalithi ezenzakalelayo zokuphila zabasebenzisi.
Okunye ukusebenza okuphezulu kweCrankshaft yamamodeli ezimoto alandelayo
IPerkins, iMitsubishi, Isuzu, Toyota, Nissan, Mazda, Suzuki, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Audi, Mercedes-benz, BMW, Land rover, Vauxhall.
Ibhizinisi lethu eliyinhloko ukuhlinzeka ngemisebenzi eyenziwe ngezifiso
sinikezela ngensizakalo eyenziwe ngezifiso ngokuya ngesampula noma umdwebo wakho
Intengo ingalinganiselwa uma ungathumela i-Stroke - i-rod journal - i-rod journal width - i-journal main - i-main journal ububanzi - ubude obuphelele - i-fan plate bore - ububanzi phakathi kwe-fan plate bore nesithombe
Izingxenye zokuzenzakalela ze-crankshaft zePerkins GDA 404 ezinenombolo ye-Oem 115256750 ngentengo yefektri
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: I-Perkins404
Ikhwalithi yemoto yekhwalithi ephezulu ilungele iPerkins403 enenombolo ye-Oem 115256950 ngentengo yangaphakathi
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: I-Perkins403
I-crankshaft yemoto esezingeni leToyota3RZ
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Toyota3RZ
I-crankshaft yinto ebaluleke kakhulu enjinini. Imelana namandla adluliswa yinduku yokuxhuma futhi ayiguqule ikhiphe i-torque nge-crankshaft bese ishayela ezinye izesekeli enjinini zisebenze. I-crankshaft ingaphansi kwamandla we-centrifugal wesisindo esijikelezayo, amandla egesi aguqukayo ngezikhathi ezithile namandla we-inertial abuyisanayo, okwenza ukuthwala kwe-crank kube ngaphansi kwemithwalo yokugoba kanye ne-torsional. Ngakho-ke, i-crankshaft iyadingeka ukuba ibe namandla anele nokuqina, futhi ingaphezulu lephephabhuku kumele lingavimbeki, lisebenze ngokulingana, futhi libe nokulinganisela okuhle.
Umkhiqizo wenziwe ngensimbi ephezulu ye-ductile nensimbi eyakhiwe, futhi iphathwa ngobuchwepheshe obuqinisa indawo ukwenza ngcono ukukhathala kwe-crankshaft.Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, i-generator ebekiwe, ikhwalithi yangempela, ngokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
I-crankshaft ejwayelekile yemoto yeToyota2Y
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Toyota2Y
Ukuze kuncishiswe ubukhulu be-crankshaft namandla we-centrifugal akhiqizwa ngesikhathi sokuhamba, iphephabhuku le-crankshaft livame ukwenziwa libe yize. Izimbobo zika-oyela zakhiwa endaweni ngayinye yejenali ukwenza lula ukwethulwa noma ukukhishwa kukoyili we-injini ukuze kugcotshwe iphephabhuku. Ukuze wehlise ukugxila kokuxineka, amalunga wejenali eyinhloko, iphini lokujula kanye nengalo eyisijumbane konke kuxhunywe yi-arc yenguquko.